प्यान अनिवार्य : कति व्यवहारिक, कामदारलाई के फाइदा ? ~ Gadhimaipatrika Your SEO optimized title
All / State 2
२ साउन, काठमाडौं । नेपालमा व्यवसाय वा रोजगारी गर्ने सबैले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने भएपछि अहिले निजी क्षेत्रमा निकै तरंग छ । सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार सडकमा प्लास्टिक टिप्नेदेखि भारी बोक्नेसम्मले प्यान नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ ।
व्यक्ति र कम्पनीले फरक-फरक प्यान लिनुपर्छ । अहिले आफूले गर्ने कारोबार, बील बीजक, खाता, आयविवरण, बैंकिङ कागजात तथा कर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्दा प्यान अनिवार्य गरिएको छ । राजस्व दाखिला गर्ने समयमा प्यान नम्बर राखियो भने राजस्वको अभिलेख पनि पारदर्शी हुने विभागको भनाइ छ ।
व्यवसाय वा आय आर्जनमा संलग्न हुने व्यक्ति वा अग्रीम करकट्टी गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । अहिले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संघ/संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थालगायत निजी क्षेत्रका संघसंस्था एवम् उद्योग व्यवसायिक र्फमबाट कर्मचारी/कामदारको एकमुष्ट फाराम भराउन सकिने सुविधा दिइएको छ ।
अहिले रोजगारीको आय हुने व्यक्तिका लागि अनिवार्य प्यानको व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्यान नम्बर वितरणको काम भने आर्थ्र्िक वर्ष २०६६/६७ बाटै शुरु भएको हो । त्यसकारण नेपालमा यो नयाँ प्रावधान भने होइन ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को समेत कारोवार गर्ने व्यक्तिले छुट्टै प्यान लिनु पर्दैन । भ्याट तिर्नुपर्ने व्यक्तिले एउटै प्यान नम्बरबाट आयकर र भ्याटको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालय/करदाता सेवा कार्यालयमा निवेदन दिइ मुअकमा दर्ता हुन सकिने प्रावधान रहेको छ ।
शहरका सुविधासम्पन्न बैंकमा लाखौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने मानिस त घण्टौं लाइनमा बसेपछि मात्र बैंक कारोबारको पालो आउने अवस्था छ । एउटा मजदुरले भारी बोकेर कमाएको १ हजार रुपैयाँ लिन कुन बैंकमा लाइन बस्न आजोस ? हामीले नीति ल्याउने क्रममा त्यसको कार्यान्वयनमा व्यवहारिक पाटोलाई उत्तिकै महत्व दिुनपर्छ ।
तर, मजदुरलाई गाह्रो हुन्छ भन्दै व्यवसायीहरु उम्कने र उनीहरुसँग सम्झौता गरी राज्य आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने जुन परिपाटीले त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । सबै कम्पनीहरु सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा जान हिच्किचाइरहेका छन् । न्यूनतम तलव दिइरहेका छैनन । सरकारी सिस्टमभित्र बैंक खाता र प्यानमार्फत यसको नियमन हुने हो भने मजदुरका समस्या न्यूनिकरण हुन्छन् । त्यसकारण अनिवार्य प्यान होस वा अन्य सिस्टममा मजदुरलाई बाहना बनाएर साहुहरु उम्कने वातावरण बन्नु हुँदैन ।